Ukulungiswa kwe-Ultrasonic of Rubber Okuqinisiwe - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-rubber aqinisekisiwe abonisa amandla aphezulu okuqina, ukuxilonga, ukumelana nokuyeka ukuqina nokuguga kangcono ukuguga.
Amafayili afana ne-carbon black (isib. CNTs, MWNTs), i-graphene, noma i-silika kumele ahlakazeke ngokufanayo ematrix ukuze ahlinzekele izinto ezifunayo.
I-ultrasonics yamandla inikeza ikhwalithi ephakeme yokusabalalisa yama-nanoparticles angenawo amakhompiyutha anezinto eziqinisa kakhulu.
I-Ultrasonication isetshenziswa kabanzi ekusakazeni izinto zokwenza izinto ezifana ne-nanoparticles enama-monodispersed nama-nanotubes, ngoba i-ultrasonics ithuthukisa ukuhlukaniswa nokusebenza kwezinhlayiya nama-tubes kakhulu.
Imishini yokuhlakaza i-Ultrasonic idala cavitation kanye nemikhakha ephakeme ye-shear ukuphazamisa, ukuguqula, ukuxubha nokuhlakaza izinhlayiya ze-nano nama-nanotubes. Ukuqina kwe-sonication kungashintshwa ngokuqondile futhi kulawulwe ukuze ama-ultrasonic processing parameters ashintshwe ngokuphelele, ukuthatha ukuxilongwa, ukuhlanganiswa, nokuhlanganiswa kwezinto eziphathelene nano. Ngaleyo ndlela, izinto zokwakha ze-nano zingenziwa kahle ngokuphathelene nezidingo zabo ezibonakalayo. Izimo ezibonakalayo zokusabalalisa ngenxa yemigomo yezinqubo ze-ultrasonic ezilungiselelwe ziphumela ekubambeni okuphezulu kwe-rubber nanocomposite ngezimfanelo eziphakeme zokuqinisa izihlanganisi ze-nano-nezindleko.
Ngenxa yezinga eliphakeme lokusabalalisa lama-ultrasonics futhi ngaleyo ndlela lifinyelele ukuhlakazeka komfaniswano, ukulayishwa okuphansi kakhulu kokugcwalisa okuwanele ukuthola okwezimpawu ezibonakalayo ezinhle kakhulu.
I-Ultrasonically i-Carbon Black-Evuselelwe Imfucumfucu
I-carbon black iyingxenye yokugcwalisa okubaluleke kakhulu kuma-rubber, ikakhulukazi amathayi, ukunikeza ukumelana nokukhwabanisa kokukhwabanisa nokuqina kwamandla. Izinhlayiya ezimnyama ze-Carbon zithandwa kakhulu ukwakha ama-aggregates anzima ukusabalalisa ngokuzenzekelayo. I-carbon black ijwayele ukusetshenziselwa amapende, ama-enamel, izinkinobho zokunyathelisa, i-nylon kanye ne-plastics colorings, i-latex mix mix, amaxube we-wax, izingubo zezithombe, nokuningi.
Ukusabalalisa kwe-ultrasonic kuvumela ukuguqula futhi ukuxuba ngokufanayo ne-monodispersity ephakeme kakhulu yezinhlayiyana.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusabalalisa kwe-ultrasonic ngezinhlanganisela eziqinisiwe!
I-Ultrasonically i-CNT- / MWCNT-I-Rubber Evuselelwe
I-homogenizers ye-Ultrasonic inamandla okuhlakazeka okungase alawulwe ngokuqondile futhi ahlelwe ekudingweni kwenqubo kanye nezinto ezibonakalayo. Ukulawulwa okucacile kwemigomo yezinqubo ze-ultrasonic kubaluleke kakhulu ekuhlakazeni ama-nanotubes anjenge-MWNTs noma ama-SWNTs kusukela ama-nanotubes kufanele ahlotshwe kuma-tubes angabonanga ngaphandle kokulimala (isib. Ukukhishwa). Ama-nanotubes angaphazamiseki anikeza isilinganiso sezinga eliphezulu (kuze kube ngu-132,000,000: 1) ukuze banikeze amandla okungafani nokuqina lapho behlelwe enhlanganisela. I-powerication, i-sonication ehlelwe ngokucophelela ihlula amandla amabutho akwa-Van der Waals futhi ihlakazeka futhi ihlaziya ama-nanotubes okuholela ekubambeni okuphezulu kwe-rubber ngamandla amakhulu okuqina kanye ne-modulus e-elastic.
Ngaphezu kwalokho, ukusebenza kwe-ultrasonic isetshenziselwa ukuguqula i-carbon nanotubes ukuze ithole izakhiwo ezifunayo ezingasetshenziselwa izicelo eziningi.
Uhlelo lwe-Industrial ultrasonic
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kweCarbon Nanotubes: I-Hielscher ultrasonicator isabalalisa futhi isakaze ama-CNTs ngokushesha nangendlela efanele kuma-nanotubes angashadile.
I-Ultrasonically Nano-Silika-I-Rubber Evuselelwe
Abahlakazeli be-Ultrasonic baletha ukufaniswa kwezinhlayiyana eziphezulu ze-silika (iSiO2) izinhlayiya ze-nano ezixazululo ze-raber polymer. I-silika (i-SiO2) izinhlayiya ze-nano kufanele zihanjiswe ngokulandelana njengezinhlayiya ze-mono-ezihlakazekile kwi-styrene-butadiene ne-other rubber. I-Mono-yahlakazeka i-nano-SiO2 isebenza njengezisebenzi zokuqinisa, ezithuthukisa ukuqina, amandla, ukuqina, ukugoba nokusebenza kokulwa nokuguga, kakhulu. Kwizinhlayiya ze-nano ziyasebenza: Ubukhulu obuncane bezinhlayiyana, bukhulu yindawo ethize yezinhlayiya. Ngendawo ephakeme yendawo / ivolumu (S / V) isilinganiso, kutholwa imiphumela emihle nokuqina, okuqinisa amandla nobunzima bemikhiqizo yerabha.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic ye-silica nano izinhlayiyana kuvumela ukulawula imingcele yezinqubo ngokuqondile ukuze i-morphology esiphezulu, ishintshwe ngokucacile usayizi wezinhlayiyana, kanye nokusabalalisa ubukhulu obukhulu kakhulu.
I-silica ehlakazeka ngokuzenzakalelayo imiphumela yokusebenza kwezinto eziphakeme kakhulu ngaleyo ndlela iqinisa i-raber.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuhlakazeka kwe-ultrasonic kwe-SiO2!
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonically ye-Reinforcing Additives
I-Sonication iye yafakazelwa ukuthi ihlakaze ezinye izinto eziningi ezingasetshenziswanga ukuze zithuthukise amandla, amandla okuqina, kanye nokukhathala kwezakhi zenjoloba. Njengoba usayizi wezinhlayiyana, ukuma, indawo kanye nomsebenzi wokugcizelela izithako kanye nokuqinisa izithasiselo kubalulekile ekusebenzeni kwazo, abahlakazekile abanamandla nabanokwethenjelwa yilezi zindlela ezivame ukusetshenziswa kakhulu ukwakha izinhlayiya ezincane nezinsimbi zibe imikhiqizo ye-raber.
Izithasiselo ezejwayelekile kanye nezihlungi, ezifakwa yi-sonication njengamasunifomu asatshalaliswa ngendlela efanayo noma ama-monodispered kumatrabha enjoloba, yi-calcium carbonate, i-kaolin yobumba, i-silica eshisiwe, i-silica, i-graphite oxide, i-graphene, i-mica, i-talc, i-barite, i-wollastonite, i-silIT eyakhiwe ngaphambili. i-silica ne-diatomite.
Lapho i-oleic acid-functionalized TiO2 nanoparticles kukhona ultrasonically abahlakazekile in rubre styrene-butadiene, ngisho inani elincane kakhulu oleic-SiO2 kubangela ama modulus amakhulu, ngcono amandla, kanye nokukhathala izindawo nemisebenzi njenge-agent evikelayo ngokumelene nesithombe nokuchithwa kwe-thermo.
I-Alumina trihydrate (Al2O3) lengezwe njengalokhu lilahlwa yilala, ukuthuthukisa ukuqhuba okushisayo, nokulandelela nokumelana nokukhuphuka.
I-zinc oxide (ZnO) izitshalo zikhulisa ukuvunyelwa kwezihlobo kanye nokuqhuba okushisayo.
Titanium dioxide (TiO2) ithuthukisa ukuqhuba kahle okushisayo nokugesi.
I-calcium carbonate (i-CaCO3) lisetshenziselwa ukwengeza ngenxa yezakhiwo zayo zokuvuselela, ezenziwe nge-rheological kanye ne-flame.
I-Barium titanate (i-BaTiO3) kwandisa ukuzinza okushisayo.
I-Graphene futhi i-graphene oxide (GO) inikeza izici eziphathekayo eziphambili, ezigesi, ezishisayo nezibonakalayo.
ngama-carbon nanotubes (CNTs) zithuthukisa izakhiwo zamashini ezinjengezikhwepha ezinamandla, ukuqhuba kagesi kanye nokuqhuba kahle kwe-thermal.
I-carbon nanotubes ene-multi-walled (MWNTs) ithuthukisa i-Young's modulus futhi inike amandla. Isibonelo, okungenani u-1 wt%% we-MWNTs ibe nomphumela we-epoxy ekwenzeni i-Young's modulus futhi inike amandla ngokulandelanayo, i-100% ne-200%, uma kuqhathaniswa ne-matrix ehlanzekile.
I-carbon nanotubes eneklamu eyodwa (SWNTs) zithuthukisa izakhiwo zomshini kanye nokuqhuba kahle kwe-thermal.
Ama-carbon nanofibers (CNF) engeza amandla, ukumelana nokushisa nokuqina.
Ama-nanoparticles ensimbi anjenge-nickel, insimbi, ithusi, i-zinc, i-aluminium, kanye isiliva zengezwa ukuthuthukisa ukuqhuba kwegesi nokushisa.
Ama-nanomaterial engokwemvelo afana nalokhu i-montmorillonite phuthukisa izakhiwo zokugcizelela futhi zishisa.
Isethaphu ye-ultrasonic ngokwezifiso ze-nano-dispersions
Izinhlelo ze-Ultrasonic Dispersion Systems
I-Hielscher Ultrasonics inikeza ububanzi obubanzi bomkhiqizo wemishini ye-ultrasonic – kusuka ezincane zamabhentshi-top systems for test feasibility kuze kube nzima-duty ama-industrial ultrasonicator amayunithi futhi kuze kube 16kW ngeyunithi. Amandla, ukwethenjelwa, ukulawulwa okuqondile kanye nokuqina kwawo kwenza izinhlelo zikaHielscher zokuhlakazeka kwe-ultrasonic “umsebenzi wehhashi” emgqeni wokukhiqiza we-micron- kanye ne-nano-ehlanganisiwe. Ama-ultrasonicators ethu akwazi ukucubungula ama-dispersions aqueous ne-solvent-based kuze kube i-viscosities ephezulu (kufika ku-10,000cp) kalula. I-sonotrodes ehlukahlukene (izimpondo ze-ultrasonic), ama-boosters (i-intensifier / i-decreaser), ukugeleza kwamakhemikhali geometri nezinye izesekeli kuvumela ukuguquguquka okuhle kwe-disperser ye-ultrasonic kumkhiqizo kanye nemigomo yayo.
Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic asebenza ezimbonini angakhulula kakhulu ama-amplitudes aphezulu. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7 ngokushesha. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher ka-Hielscher kuvumela 24/7 ukusebenza ku umsebenzi onzima futhi ekudingeni izindawo. Abahlakazeli base-Hielscher`s ultrasonic bafakwe emhlabeni jikelele ukukhiqizwa okukhulu kwezebhizinisi.
Ukusetshenziswa kwe-deagglomerating nokusabalalisa i-carbon black powder emanzini kungafinyelelwa ngempumelelo kusetshenziswa i-ultrasonication esebenza kahle kakhulu. Le vidiyo ikhombisa iHielscher UP200St (200W, 26kHz) ehlakaza izinhlayiya ezimnyama zekhabhoni emanzini. Phakathi kuka-80 kusetshenziswa njenge-stabilizer / surfactant ukuze kutholakale ukumiswa okwesikhashana okuzinzile okungalingani.
I-Bitenieks, i-Juris; Meria, Remo Merijs; AmaZiki, uJanis; UMaksimovs, uRoberts; UVasilec, uCornelia; I-Musteata, i-Valentina Elena (2012): Styrene-acrylate / carbon nanotube nanocomposites: izakhiwo ezinomshini, ezishisayo nezigesi. Izinqubo ze-Academy of Sciences yase-Estonia, 2012, 61, 3, 172-177.
I-Kaboorani, i-Alireza; U-Riedl, uBernard; UBrachet, Pierre (2013): Ultrasonication Technique: A Indlela yokusakaza Nanoclay in Wood Adhesives. I-Journal of Nanomaterials 2013.
Umama, G .; Farzaneh, M. (2011): Inhlolovo yokusetshenziswa kwe-Micro / Nano Filler ukuthuthukisa i-Rubber Rubber For Outdoor Insulators. Ukubukezwa kweSayensi yezinto eziphambili ezisezingeni eliphezulu 27, 2011. 1-3.
I-Sharma, i-SD; Singh, S. (2013): Synthesis and Characterzation Zirconia Ngokuphumelelayo Nano Sulfated phezu Silica: Core-Shell Catalyst by Ultrasonic Irradiation. I-American Journal of Chemistry 2013, 3 (4): 96-104.
Ijajubhi yokwenziwa yimuphi i-elastomer yokufakelwa. Ama-rubber ama-synthetic amakhemikhali amancane ahlanganiswa kusukela ku-petroleum byproducts futhi enza, njengamanye ama-polymers, avela ezihlotsheni ezihlukahlukene ze-petroleum-based. Ijajubhi evamile kakhulu yokwenziwa yocubha yereberne-butadiene (SBR) etholakala ku-copolymerization ye-styrene ne-1,3-butadiene. Amanye ama-rubber acwebheni alungiswa kusuka ku-isoprene (2-methyl-1,3-butadiene), i-chloroprene (i-2-chloro-1,3-butadiene), ne-isobutylene (i-methylpropene) enephesenti elincane lokungaxhunyiwe kwe-cross-linking. Lezi nezinye i-monomers zingaxubaniswa ngezilinganiso ezehlukene ukuze zikhiqizwe imikhiqizo enezinhlobo ezihlukahlukene zomzimba, izakhi namakhemikhali. Ama-monomers angenziwa ahlanzeke futhi ukungezwa kokungcola noma izithasiselo kungalawulwa ngokuklama ukunikeza izindawo ezifanele. I-polymerization yama-monomers ahlanzekile ingalawulwa kangcono ukunikeza inani elifunayo lama-cis ne-trans double bonds.
I-rubber yomsindo, njengenjoloba yemvelo, isetshenziselwa kakhulu embonini yezimoto ngamathayi, amaphrofayli emnyango kanye nezindwangu, ukuqhuma, amabhande, ukulinganisa, nokubeka phansi.
I-raber yemvelo nayo yaziwa nangokuthi i-India yerabha noma i-rubber. I-raber yemvelo ihlukaniswa njenge-elastomer futhi iqukethe ikakhulukazi ama-polymers we-organic compound poly-cis-isoprene namanzi. Iqukethe imikhakha yokungcola njengeprotheni, ukungcola njll. Injoloba yemvelo, etholakala njenge-latex kusuka esihlahleni senjoloba I-Hevea Brasiliensis, ibonisa izakhiwo ezinhle kakhulu. Kodwa uma kuqhathaniswa ne-rubber synthetic, i-raber yemvelo inomsebenzi ophansi osebenzayo ikakhulukazi ngokuphathelene nokuzinza okufudumele nokuhambisana kwayo nemikhiqizo ye-petroleum. I-rubber yemvelo inezinhlobonhlobo zezicelo, noma zodwa noma zihlangene nezinye izinto. Ngokuyinhloko, lisetshenziselwa ukulingana okukhulu, ukuqina okukhulu, nokuphakama kwamanzi okuphakeme kakhulu. Iphuzu lokuqhakazila kwenjoloba lingu-180 ° C (356 ° F).
Ithebula elingezansi linikeza ukubuka okuningiliziwe phezu kwezinhlobo ezahlukene zenjoloba:
I-ACM I-Polyacrylate Rubber
I-AEM I-Ethylene-acrylate Injoloba
I-AU I-Polyester Urethane
BIIR I-Bromo Isobutylene Isoprene I-Bromobutyl
I-BR I-Polybutadiene I-Buna CB
I-CIIR I-Chloro Isobutylene Isoprene I-Chlorobutyl, i-Butyl
CR I-Polychloroprene I-Chloroprene, i-Neoprene
CSM I-Chlorosulphonated Polyethylene I-Hyponi
EP I-Ethylene Propylene
I-EPDM I-Ethylene Propylene Diene Monomer EPDM, Nordel
EU I-Polyether Urethane
FFKM I-Perfluorocarbon Rubber Kalrez, Chemraz
I-FKM I-Hydrocarbon ene-fluoronated I-Viton, i-Fluorel
FMQ I-Fluoro Silicone I-FMQ, i-Rubber Rubber
I-FPM I-Fluorocarbon Rubber
I-HNBR I-nitrole Nutrile Butadiene I-HNBR
IR I-Polyisoprene (Zokwenziwa) I-Rubber yemvelo
IIR Isobutylene Isoprene Butyl I-Butyl
I-NBR Acrylonitrile Butadiene I-NBR, i-Nitrile, i-Perbunan, i-Buna-N
I-PU I-Polyurethane I-PU, i-Polyurethane
I-SBR Styrene Butadiene I-SBR, i-Buna-S, i-GRS, iBuna i-VSL, i-Buna SE
SEBS I-Styrene Ethylene Butylene Styrene I-Copolymer SEBS Injoloba
SI I-Polysiloxane I-Rubber Rubber
VMQ I-vinyl i-Methyl abicah I-Rubber Rubber
I-XNBR I-Acrylonitrile Butadiene Carboxy Monomer I-XNBR, i-Nitrile ye-Carboxylated
I-XSBR I-Styrene Butadiene Carboxy Monomer
YBPO I-thermoplastic Polyether-ester
I-YSBR I-Copyrmer ye-Styrene Butadiene Block
YXSBR I-Styrene Butadiene Carboxy Block Copolymer
I-styrene-butadiene noma i-styrene-butadiene i-rubber (i-SBR) ichaza ama-rubber acwecwe, atholakala ku-styrene ne-butadiene. I-styrene-butadiene eqinisekisiwe ekhonjiswe ukuphikiswa kwayo okuphezulu nokukhwabanisa okuhle. Isilinganiso esiphakathi kwe-styrene ne-butadiene sinquma izakhiwo ze-polymeri: ngokuqukethwe okuphezulu kwe-styrene, ama-rubber abe yilapho ekhuphuka kakhulu.
Ukulinganiselwa kwe-SBR okungenakuqiniswa kubangelwa amandla akhe aphansi ngaphandle kokuqiniswa, ukuqina okuphansi, amandla okuphumula aphansi (ikakhulukazi emazingeni aphezulu okushisa), kanye nokunciphisa. Ngakho-ke, ukuqinisa ama-agent kanye nokugcwalisa kudingeka kuthuthukiswe izindawo ze-SBR. Isibonelo, izitsha ze-carbon black zisetshenziselwa ukuqina nokumelana nokumelana okukhulu.
I-Styrene (C8H8) eyaziwa ngaphansi kwemibandela ehlukahlukene e-ethenylbenzene, i-vinylbenzene, i-phenylethene, i-phenylethylene, i-cinnamene, i-styre, i-diarex i-HF 77, i-styrolene, ne-styropol. Liyinkimbinkimbi ye-organic ne-formula yamakhemikhali C6H5CH = CH2. I-styrene yi-precursor ye-polystyrene ne-copolymers eziningana.
I-benzene derivative futhi ibonakala njengamanzi angenambala anamafutha, aphuphuma kalula. I-Styrene inephunga elimnandi, eliphendukela ekugxilweni okuphakeme ngephunga elimnandi kakhulu.
Ngaphambi kweqembu le-vinyl, i-styrene yakha i-polymer. I-polymers esekelwe e-Styrene yenziwe ngokudayisa ukuze ithole imikhiqizo enjenge polystyrene, ABS, i-raber styrene-butadiene (SBR), i-latex-styrene-butadiene, i-SIS (styrene-isoprene-styrene), i-S-EB-S (i-styrene-ethylene / butylene- i-styrene), i-styrene-divinylbenzene (i-S-DVB), i-styrene-acrylonitrile resin (SAN), nama-polyesters angasetshenzisiwe asetshenziselwa izinhlayiya kanye nama-thermosetting compounds. Lezi zinto ziyingxenye ebalulekile ekukhiqizeni imfucumfucu, ipulasitiki, ukugxilonga, i-fiberglass, amaphayiphi, izingxenye zezimoto nezikebhe, iziqukathi zokudla, kanye nokusekela umshini.
I-Rubber inezici eziningi zezinto ezibonakalayo njengamandla, ukuhlala isikhathi eside, ukumelana kwamanzi nokumelana nokushisa. Lezo zakhiwo zenza i-rubber ibe yinkimbinkimbi kakhulu ukuze isetshenziswe ezimbonini eziningi. Ukusetshenziswa okuyinhloko kwenjoloba kumboni yezimoto, ikakhulukazi ekukhiqizeni ithayi. Izici eziqhubekayo njengoba ukungahambisani nakho, ukuthobeka, ukuqina nokuqina kwazo kwenza i-rubber ibe yincubha ejwayele ukusetshenziselwa ukukhiqizwa kwezicathulo, izansi, ukuhlinzeka ngemithi yezempilo kanye nempilo, imikhiqizo yasendlini, amathoyizi, ama-athikili ezemidlalo kanye neminye imikhiqizo ye-raber.
Izigcwalisi ze-nano-size kanye nezithasiselo ezinjenge-rubbers zisebenza njengama-reinforcing kanye nama-protective agent ukuze kuthuthukiswe amandla okuqina, ukumelana nokuqeda amandla, ukumelana nezinyembezi, i-hysteresis nokulondeka ngokumelene nokushiswa kwesithombe nokushisa kwe-raber.
I-silika (i-SiO2, i-silicon dioxide) isetshenziswe ngezindlela eziningi ezifana ne-amorphous silica, isib. i-silica fumed, i-silika evuthayo, i-silica eyandayo ukuze kuthuthukiswe izici eziphathekayo mayelana nezakhiwo ezinamandla, ukumelana nokushisa okufudumele, kanye nokuziphatha kwe-morphology. Amakhemikhali agcwele i-silika abonisa ukunyuka kwe-viscosity ne-crosslink okwandayo ngokulandelana kokuqukethwe okukhulayo okugcwala. Ubunzima, i-modulus, amandla okuqina, kanye nezici zokugqoka zathuthukiswa kancane kancane ngokwandisa inani le-silica-filler.
I-carbon black isendlela ye-carbon paracrystalline ne-chemisorbed oxygen complexes (njenge-carboxylic, quinonic, lactonic, amaqembu e-phenolic nabanye). Lawa maqembu e-oksijeni angaphezulu ajwayele ukuqoqwa ngaphansi kwegama “izakhiwo ezinzima”. Ngenxa yalokhu okuqukethwe okunamandla, i-carbon black ayiyona into ephathekayo. Kunzima ukusabalalisa nge-carbon-oxygen complexes.
Isilinganiso esiphakeme sendawo-kuya-volume volume carbon carbon senza ukugcwalisa okuvamile ukuqinisa. Cishe yonke imikhiqizo yerabha, okuyiwona okudingekayo amandla okuqina kanye nokumelana nokukhwabanisa, sebenzisa i-carbon black. I-silika esenqunyiwe noma eyisiphundu isetshenziselwa esikhundleni se-carbon black, lapho kuqiniswa khona imfucuza kodwa umbala omnyama kufanele ugwenywe. Kodwa-ke, izigcawu ezisekelwe nge-silika zithola ingxenye yamakethe emathayeleni omoto, futhi, ngoba ukusetshenziswa kwe-silica fillers kuholela ekulahlekelweni okuphansi okuqhathaniswa namathayi aphethwe yi-carbon.
Ithebula elingezansi linikeza ukubuka okuningiliziwe phezu kwezinhlobo ze-carbonblack esetshenziselwa amathayi
Usayizi wezinhlamvu nm
I-MPa yamandla amakhulu
Ama-laboratory abrasion ahlobene
Ukuhlukunyezwa komgwaqo ohlobene
I-Super Abrasion Furnace SAF N110 20-25 25.2 1.35 1.25
I-SAF ephakathi I-ISAF I-N220 24-33 23.1 1.25 1.15
Isithanga Esiphezulu Sokuthunjwa HAF N330 28-36 22.4 1.00 1.00
I-Channel Processing Processing I-EPC N300 30-35 21.7 0.80 0.90
Isithandana esisheshayo ngokushesha FEF N550 39-55 18.2 0.64 0.72
I-Modulus Furnace ephezulu I-HMF N660 49-73 16.1 0.56 0.66
I-Semi-Reinforcing Furnace I-SRF N770 70-96 14.7 0.48 0.60
Thermal Fine FT N880 180-200 12.6 0.22 –
Ukushisa Okuphakathi MT N990 250-350 9.8 0.18 –
I-graphene oxide yahlakazeka emiphumeleni ye-SBR emandleni aphezulu nokuqina kwamandla okuphuza kanye nokumelana nokugqama okuphansi kakhulu, okuyizinto ezibonakalayo ezibalulekile ekukhiqizeni ithayi. I-graph-oxide-silica eqinisiwe i-SBR inikeza okunye ukuncintisana komkhiqizo wokukhipha isondo nokusimama kanye nokukhiqizwa kokuhlanganiswa okukhulu kwe-rubber composites. I-graphene ne-graphene oxide ingaba ngempumelelo, ngokuthembekile futhi kalula ngokukhipha ngaphansi kwe-sonication. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokwenziwa kwe-ultrasonic ye-graphene!